Ogaden Online: The official homepage of Ogaden on the Internet - Buundadii wabiga magaalada Godey oo ay Itoobiya dumisey
Text size	Home Horn NewsDjibouti Somalia Eritrea Kenya Ethiopia Ogaden WararkaOgaden Itoobiya Soomaaliya Kenya EntertainmentMusic HealthDiet and Fitness You and Your Family Commentary & AnalysisEditorial Opinion Community EventsWararka Tacsi Tahniyad Ogeysiis Announcement Radio Xoriyo Radio ICDSabti Axad Isniin Arbaco Radio Qorahay Home Wararka Ogaden Buundadii wabiga magaalada Godey oo ay Itoobiya dumisey
Buundadii wabiga magaalada Godey oo ay Itoobiya dumisey	Tuesday, 22 September 2009 11:47	Cabdi Nuur Sh. Maxamed, Radio Xoriyo	Wariyaha RX ee magaalada Goday ayaa noo soo xaqiijiyay in gabi ahaanba dhulka lalasimay Buundadii magaalada Goday. Buundadan ayaa halbawle u ahayd isu socodka gobalada Ogaadeenya iyo dadka beeraleeyda ah ee deegaanka Goday. Buundadan oo ay ciidamada Itooboiya burburiyeen ayaan ilaa iyo hada aan lagaranayn sabata ka danbaysa burburinteeda. Burburinta buunda Goday ayaa sababtay kala go,a ganacsiga iyo wax soo saarkii beeraha. Masuuliyiin kusugan magaalada Goday oo aan la xidhiidhnay ayaa noosheegay in ayana aad ula yaabaynin falkan waayo Itoobiya wax walba oo dhib ah waa kasuurtagal.Tweet